GlobalNet | Growing IEPL service
GlobalNet builds over 25,000 KM with fully redundant infrastructure throughout the country.
By using those reliable and redundant infrastructures, one of GlobalNet ethernet private connectivity solutions become popular among other products.
IEPL (International Ethernet private line) services are essential for those clients who required private, dedicated, point-to-point service, premium end-to-end transmission, secure and reliable connectivity such as those in financial, logistics, banking, and factory.
So, this service meets all your info-communication and data transmission needs from voice, data and video communication.
GlobalNet သည်ကီလိုမီတာ ၂၅၀၀၀ ကျော်လျားပြီး ပျက်တောက်မှုမရှိအောင် အပြည့်အ၀အာမခံချက်ပေးနိုင် သည့် ခိုင်မာသောနည်းပညာအခြေခံအအုံ (Infrastructure) ၊ အရည်အသွေးမြင့် Fiber Cable များဖြင့် အင်တာနက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ဆောင်မှု များကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားချိတ်ဆက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သော ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လိုင်းပျက်တောက်မှု မရှိအောင် အပြည့်အ၀ အာမခံချက်ပေးနိုင်သည့် Infrastructure များနှင့် တည်ဆောက်ထားသည့် Global Net ၏ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၀န်ဆောင်မှု့များထဲမှ Ethernet Private Solution သည် နာမည်ကောင်းရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုတခုဖြစ်လာပါသည်။
IEPL ( International Ethernet Private Line ) service သည် ပြည်တွင်းရှိ ရုံးများနှင့် ပြည်ပ မှာရှိသော ရုံးများသို့ dedicated point to point ချိတ်ဆက်ပေးသော service ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၊ သီးသန့်ဖိုင်ဘာလိုင်းလိုအပ်သောလုပ်ငန်းများ၊ ရုံးချုပ်-ရုံးခွဲများအကြား လုံခြုံစိတ်ချရမှုအမြင့်မားဆုံးဖြင့် Data များ အပြန်အလှန်ပေးပို့နေရသောလုပ်ငန်းများ၊ Logistic လုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံများကဲ့သို့ လုံခြုံစိတ်ချရသော ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သော လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကအသုံးပြုနေရသော data transfer, video conferencing , server host, Applications များကို ပြည်တွင်းရုံးများနှင့် ပြည်ပရုံးများ သို့ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည့် service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်ထံ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ၊ IEPL နှင့် ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှု တွေကို ယနေ့ ပဲ GlobalNet ထံ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးလိုက်ပါ
Communication asaService...
ယခုလိုကာလအတွင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုများ၊ ...